Tombony 6 azo avy amin'ny vovoka Nootropic Sunifiram (DM235)
6 tombony azo avy amin'ny vovoka Nootropic Sunifiram (DM235)
1. Inona no atao hoe Nootropics sy Sunifiram?
2. Ahoana ny fomba fiasan'ny Sunifiram?
3. Fiantohana dimy mety ho an'ny Sunifiram
4. Ahoana ny fampiasana Sunifiram
6. Inona avy ireo voka-dratsin'ny Sunifiram
7. Iza no afaka mampiasa ny Sunifiram
Inona no atao hoe Nootropics sy Sunifiram?
Efa nieritreritra ve ianao ny hamotsotra ny tanjona lehibe amin'ny resaka fahatsiarovana, fifantohana, ary famoronana? Indraindray azonao atao ny manandrana ny fanadinana anao saingy mahatsiaro ho sahirana loatra ianao handoro ny menaka mamatonalina. Ny tsara dia izao, afaka mampitombo mora foana ny fahaizanao misaina ao anatin'ny fotoana fohy. Amin'ny fahatongavan'ny teknolojia, afaka mahafantatra bebe kokoa momba ny vokatra izay hametraka anao voalohany.
Raha te hahatsapa ny fanatsarana ny fomba fiasan'ny atidohanao ianao, dia tokony hanandrana hampiasa nootropics. Nootropic dia avy amin'ny teny hoe "NOUS" sy "TROPOS" izay midika hoe ati-doha, niova na niova. Fantatra kokoa amin'ny anarana hoe fanafody marani-tsaina izy ireo izay manatsara ny fiasan'ny saina. Nandritra ny taona maro, ny nootropics dia fantatra fa mampitombo ny maranitra ary misy akony lehibe amin'ny fahaizan'ny saina.
Tonga mora ampiasaina ny Nootropics, indrindra rehefa mihantona ianao ary mila zavatra hampiavaka anao. Ireo mpandraharaha, mpianatra, ary na ireo mpiady aza dia nampiasa nootropics foana hahitana ny sisiny. Ankoatr'izay, nootropics dia notaterina fa mahasoa amin'ny marary mijaly noho ny tsy fetezan'ny motera toa an'i Huntington's, Parkinson, ADHD, ary ny aretina Alzheimer.
Ny iray amin'ireo nootropics manome valiny tena tsara dia Sunifiram, izay fantatra koa amin'ny hoe DM-235. Ny firafiny dia mitovy amin'ny an'ny racetam nootropics fa an'arivony mahery mahery noho ny piracetam. Ny antsasaky ny androm-piainan'i Sunifiram dia adiny iray ka hatramin'ny roa.
Io nootropic dia novokarin'ny mpahay siansa avy amin'ny Oniversiten'i Firenze any Italia tamin'ny taona 2000. Tsy nohadihadiana tanteraka izy io, fa ny fandinihan-tena voalohany natao tamin'ny biby dia mampiseho fa tena tsy mitongilana loatra izy io, izay afaka mitana anjara toerana lehibe amin'ny fitantanana ny aretin'ny neurolojia.
Ahoana ny fomba fiasan'ny Sunifiram?
Na dia Sunifiram dia heverina fa ny doka piracetam, ny singa hafa dia hafa raha oharina amin'ny racetams. Izy io dia sokajy ao amin'ny kilasy simika mitovy amin'ny piperazine alkaloid.
Na dia tsy tena takatra aza ny fomba fiasan'ny hetsika, dia fantatra fa miasa amin'ny alàlan'ny fanentanana ny hetsiky ny glutamate. Izy io koa dia mampitombo ny famokarana sy ny fanafarana acetylcholine, izay mpandalina ny neurotransmitter.
Ny hetsiky ny Sunifiram voalohany dia heverina ho toy ny ampakine. Midika izany fa rehefa mandalo ny sakana amin'ny ati-doha, dia mifandray amin'ny mpitsabo glutamate AMPA izy io izay hita ao amin'ny atidoha. Vokatr'izany dia misy ny fanentanana ny famokarana glutamate, izay tena iantsoana ny neurotransmitter ary ny anjara andraikiny dia ny fampidirana an-tsokosoko.
Glutamate dia mpandàla ny neurotransa manaitaitra izay ny anjara asany amin'ny fampiroboroboana ny plastika synaptika. Midika izany fa manatsara ny fahaiza-manaony izy io ka afaka mamaly amin'ny fihenana na fihenan'ny asa.
Ny vatana dia mila avo lenta amin'ny glutamate mba hahafahana mandroso maharitra na ny fanatsarana maharitra eo amin'ny tanjaka famantarana eo amin'ny neurônina.
Ny glutamate ihany koa dia ilaina amin'ny hippocampus, ny anjara asany ao amin'ny atidoha dia ny mamela ny navigatika amin'ny habakabaka. Izy io koa dia manome ny fananganana sy ny fitehirizana fahatsiarovana. Heverina fa ny fahaizan'i Sunifiram hanatsara ny asan'ny cognitive dia vokatry ny fanatsarana ny hery fanindrahindrana ny hippocampus.
Ankoatra ny fampitomboana ny fahatsiarovana sy ny fahatsiarovana, ny ampakines dia manome fanentanana malefaka izay manampy amin'ny fitomboan'ny fahanginana sy ny hery. Soa ihany fa tsy miteraka fikoropahana izany, ary vokatry ny fampiasana fanentanana toy ny amphetamines, methylphenidate (Ritalin), ary kafeinina.
Fanampin'izany, ny Sunifiram dia miasa toy ny cholinergic amin'ny fampitomboana ny famokarana sy famoahana ny acetylcholine. Ny acetylcholine dia misy fiantraikany amin'ny ankamaroan'ny fahalalana, toy ny fianarana haingana sy ny fahaiza-manao, ny fahatsiarovan-tena, ary ny fahafahana mamaha olana maro samihafa tsy mila miankina amin'ny fitondran-tena.
Na dia mbola tsy fantatra aza ny fomba hifehezan'i Sunifiram ny famokarana acetylcholine, dia nanadihady ny biby italiana iray fa nyDM235 dia nisy vokany cholinergic mitovy amin'ny piracetam.
Ny fomba fiasa Sunifiram vs. Adderall dia samy hafa be satria ny Adderall dia miasa amin'ny alàlan'ny fanentanana ny famotsorana ny norepinephrine sy ny dopamine, izay mampitombo ny fifantohany ary koa mitarika fanentanana ara-batana sy ara-tsaina.
Ny Sunifiram, amin'ny lafiny iray, dia miasa amin'ny glutamate receptors ka hampitombo ny famolavolana fahatsiarovana.
Fiantohana dimy mety ho an'ny Sunifiram
Mendrika ny hanana fiainana mahafa-po ny olon-drehetra. Na dia ny firaisana ara-nofo mahasalama aza no iray amin'ireo zavatra tokony halain'ny olona iray mandritra ny androm-piainana, dia mety tsy ho an'ny olon-drehetra izany.
Ny olona sasany dia mety ho eo amin'ny fihetseham-po amin'ny fotoana rehetra ho an'ny hafa mety hivezivezena tsindraindray. A ambany Mety hahatonga anao hijaly ara-pihetseham-po sy hanimba ny fifandraisanao koa. Soa ihany, na dia mavesatra loatra aza ny fiatrehanao ny firaisana ara-nofo dia misy ny fanampiana.
Iray amin'ireo fomba mora indrindra ahafahanao maniry ny hanana fotoana mahafinaritra miaraka amin'ny vadinao ny mandray Sunifiram. Izany dia satria io no mamitaka amin'ny fampahatsiarovan-tena anao ho tsy afaka manohitra ny vadinao. Ny fandinihana natao tamin'ny lehilahy sy ny vehivavy dia naneho fa ny iray amin'ireo tombony azo avy amin'ny Sunifiram dia ny fiatraikany tahaka ny afrodisyac rehefa mandray azy io.
Na dia tsy mbola fantatra aza hoe ahoana no mahatonga ny fitomboan'ny libido, dia misy soso-kevitra sasany milaza fa miteraka fitomboan'ny ratra mankany amin'ny penis sy ny vagina.
Ary koa, Sunifiram poids dia afaka manatsara ny kalitaon'ny fiainan'ny olona iray amin'ny fanaovana firaisana ara-nofo amin'ny alalan'ny fanamafisana ny fahamendrehana bebe kokoa, ny fanamafisana ny heriny ary ny fanentanana ny famotsorana ny dopamine sy serotonin (akora simika tsara) ao amin'ny atidoha.
Fanatsarana ny maso sy ny fahatsapana
Mety hiteraka olana ara-pahasalamana ny masontsika amin'izao fotoana izao noho ny fahaverezan-doha. Ny fampisehoana amin'ny isa kely sy sary amin'ny sary kely, telefaona ary televiziona koa dia afaka manampy azy io. Mety mbola ratsy kokoa ho an'ny sasany ny fitsaboana mety ho antsika, indrindra rehefa voatery manao jiro ianao.
Ny fahitana tsara dia tena ilaina satria mandeha lavitra amin'ny fanatsarana ny fampisehoana. Raha tsara endrika ny fahitana anao, dia mety hahatsikaritra ny fiovana ianao ary hihetsika haingana amin'izy ireo. Moa ve ianao mieritreritra fomba iray ahafahanao manatsara ny fahitanao raha tsy mitafy solomaso izay mety manimba ny fiantraikany sy manimba ny masony?
Sunifiram dia voalaza fa hanome ny mpampiasa azy fomba fijery manjelanjelatra izay mahatonga ny hazavana sy ny haizina hazava kokoa. Izy io koa dia mahatonga ny loko hiseho mavitrika.
Ho an'ny hafa, ny poizina Sunifiram (314728-85-3) dia voalaza fa hahatonga ny mozika hanintona kokoa ny saina ary hanome fahafaham-po ara-pihetseham-po iray.
Fihetseham-po sy hery fiarovana izany
Mahatsiaro tena ve ianao, na ratsy, manga, na tsy mamokatra? Efa nahatsapa ianao ambany hery misintona anao midina ny haavon'ny ary tsy misy kafe na zava-pisotro misy angovo akory aza toa manome vahana anao? Raha mandalo an'io ianao dia azonao atao ny manandrana ny effet Sunifiram hitazomana ny hakamoana.
Ireo mpandray anjara izay nampiasa Sunifiram dia nitatitra fa nampitombo ny herin'izy ireo izany ary nanome azy ireo fomba fijery miabo. Mba hisian'ny angovo dia mampiasa ny glucose ao anaty ao ny ati-doha izay mazàna manome ny sela mena. Ny iray amin'ireo zava-mahadomelina manakana ny fikorianan'ny glucose ao amin'ny fonon'ny sela dia ny Pentobarbital. Ny doka Sunifiram ambany dia nampiseho izany vokatra izany.
Tsy vitan'ny glucose intsony ny miala amin'ny sela mena. Noho izany dia ilaina amin'ny fihenan-tsakafo ambany izy io satria mampiroborobo ny fitrandrahana glucose.
Manatsara ny fifantohana, ny antony manosika ary ny fahatsapana ara-tsaina
Miaina ao anatin'ny tontolo izay voafetra amin'ny zavatra maro isika. Indraindray izy ireo dia mety handanjalanja sy hanimba antsika. Ny filokana tsy maintsy mitsangana isan'andro, amin'ny fotoana mahatsiravina sy manao toy izany dia mety handavo antsika. Raha tena manosika mafy sy mifantoka amin'ny asa rehetra izay mety ataon'ny olona, ​​dia mety tsy ho mora ny hahavita izany.
Maro ny torohevitra momba Ahoana no ahafahanao manatsara ny fifantohanao ary nomena ny fifantohana manodidina ny tranonkala. Na dia mety tsy azonao antoka aza hoe iza amin'izy ireo no manatitra, dia mety ho tianao ny hahafantatra momba ny Sunifiram vokany.
Ny iray amin'ireo tombony azo avy amin'ny Sunifiram dia ny fanatsarana bebe kokoa ny fifantohana, ny fifantohana ary ny fahazavan-tsaina. Izy io koa dia manampy amin'ny fanatsarana ny antony manosika izay tena ilaina amin'ny fahombiazana amin'ny fikirakirana sy ny fanatanterahana ny asa ara-tsaina.
Mety ho noho Sunifiram manatsara ny famokarana ny neurotransmitter acetylcholine, izay ny anjara asany dia ny hampiroborobo ny fahaizan'ny kognita.
Manamafy ny fianarana sy ny fitadidiana
Raha maro no mino fa tsy afaka mampianatra marika tranainy vaovao ianao, dia mety tsy izany no mitranga amin'ny atianao. Na inona na inona taonanao, ny atidohanao dia afaka manova sy miova rehefa mahatsiaro ny fahaizanao sy ny fahaiza-mianatra. Amin'ny fanampiana ampy, dia afaka manatsara ny fahaizana mianatra zava-baovao ary manatsara ny fahatsiarovanao.
Ny fikarohana natao ho an'ny biby dia nampiseho fa ny Sunifiram koa dia manatsara ny fahaizan'ny fianarana sy ny tahirin-kevitra. Ankoatra ny fanatsarana ny fahombiazan'ny asa fianarana, dia namerina namoaka amnesia simika izy. Ny fandinihana natao tamin'ny olon-dehibe salama dia mampiseho fa na dia amin'ny dosia kely aza, dia mbola ilaina ihany ny fampivoarana ny fahatsiarovana sy ny fianarana.
Ny mpampiasa Sunifiram iray dia nitombo isa IQ tamin'ny isa dimy ambin'ny folo taorian'ny fampiasana fatra Sunifiram 25mg inefatra isan-kerinandro mandritra ny efa-bolana.
Mety hampihena ny fahatsapana fanaintainana izany
Ny vokatry ny analgesika izay Sunifiram dia manampy azy hiasa a panafody ary ny hatsarana miaraka aminy dia ny tsy miteraka ny fahaketrahana sy ny tebiteby izay mahatonga ny fanaintainan'ny fanaintainana hafa.
Ny fikarohana natao tamin'ny totozy dia naneho fa ny famenon-tsakafo Sunifiram dia nanemotra ny fihetsik'izy ireo manoloana ny hafanana, manondro fa io nootropic io dia manana toetra manala fanaintainana. Ity vokatra ity dia voamarina fa tampon'isa amin'ny fatra Sunifiram an'ny (0.01 mg / kg) dia avo kokoa, na ny doka ambany dia tsy mahomby.
Ahoana ny fampiasana Sunifiram
Sunifiram dia iray amin'ireo nootropika matanjaka indrindra eny an-tsena ankehitriny ary noho izany dia tokony horaisina am-pitandremana be. Koa satria mbola tsy nianarana tsara izy io, dia sarotra ny mamoaka fatra mety. Ny iray kosa dia tokony hitazona fatra ambany, indrindra raha vao voalohany mampiasa azy io.
Amin'ny ankapobeny dia tonga amin'ny endrika vovoka izy io, ary ny fatra Sunifiram manomboka izay matetika dia 3mg ka hatramin'ny 4mg nalaina intelo isan'andro.
Matetika, misy fomba roa samy hafa ahafahanao mandray vovoka Sunifiram; azonao atao ny misafidy ny mampifangaro azy amin'ny rano na maka azy tsikelikely. Raha apetrakao eo ambanin'ny lelanao ianao dia ho hitanao fa misy fihenam-bidy kely na fahatsapana mangatsiaka toa ilay zavatra tsapanao rehefa mametraka fofona mahery ianao eo ambanin'ny lelanao.
Ny dosage isaky ny diplaoma dia voaporofo fa miasa haingana sy mahery. Fantatrao fa ity fanafody ity dia efa nahomby raha vao nanomboka nahatsapa vokatra mahafa-po toy ny an'i Adderall ianao.
Raha vantany vao lasa mpampiasa Sunifiram za-draharaha ianao dia afaka mampitombo ny fatra hatramin'ny 5mg na 8mg tsikelikely. Izany no fatra antonony tokony ho raisin'ny mpampiasa za-draharaha. Alohan'ny hampitomboana ny fatrao dia alao antoka fa efa naka ny nootropic ianao nandritra ny herinandro mahery tamin'ny dosie ambany.
Tsy tokony hihoatra ny 10mg isan'andro akory ianao satria ny vokatry ny Sunifiram maharitra dia mbola dinihina. Ny fakana azy mandritra ny fotoana lava dia mety hampiorina ny fandeferana; noho izany, ny zavatra tsara tokony hatao dia ny mihazakazaka tsingerin'ny Sunifiram arahin'ny fiatoana.
Ny Sunifiram stack dia fitambaran'ny Sunifiram miaraka amina iray na mihoatra ny famenon-tsakafo nootropic hoentina miaraka na amina filaharana hahatrarana tombony bebe kokoa amin'ny kognita. Ny fandraisana Sunifiram irery dia manome tombony manokana fa ny fametahana azy amin'ny nootropic hafa dia midika fa mihamaro ny tombony. Ianao kosa dia mila mitandrina momba ny fatra Sunifiram izay tapaka fa raisinao miaraka amin'ny nootropics hafa mandra-pahafantanao ny fihetsikao manoloana azy ireo.
For enhancing mood
Ireto misy fahasamihafan-tohatra maro izay mifototra amin'ny Sunifiram mba hamaha ny olan'ny fihetseham-po ratsy.
L-theanine- Miasa amin'ny fampiroboroboana ny famokarana ny GABA, serotonine, ary dopamine. Manakana ny fiarovana ny glutamine koa izany.
Sulbutiamine- Manampy ny glutamatergic, dopaminergic ary cholinergic transmission.
Aza adino ny mampiditra loharano tsara ao Choline izay ho toy ny potentiônera ary hisoroka anao amin'ny fanaintainana sy ny vokany hafa.
Ho an'ny vokatra kognitive
Ity stack Sunifiram ity dia iray amin'ireo karazana stack amin'ny mahazatra. Ho an'ny vokatra ara-pahalalana fanatsarana, Matetika Sunifiram dia mitambatra amin'ny iray na maromaro nootropics avy amin'ny fianakaviana racetam toy ny Noopept, Oxiracetam, ary Piracetam. Satria fantatra ny fihenan'ny racetams ny fihenan'ny choline ao amin'ny atidoha, loharanom-baovao tsara toy ny choline Alpha GPC, centrophenoxine na choline CDP no soso-kevitra.
Inona avy ireo voka-dratsin'ny Sunifiram
Miaraka amin'ireo rehetra mitady fomba ahafahan'izy ireo manatsara ny fahombiazany sy ny fahasalamany amin'ny ankapobeny, dia maro no lavo amin'ny fanafody izay nahatonga ny fiantraikany ratsy amin'ny fahasalamany. Ny sasany dia mety hiteraka olana ara-pahasalamana, fa ny hafa kosa mety hanimba tanteraka ny vatana. Ny tsara indrindra nootropic izay hamela anao hahazo ny tombontsoa raha tsy mamela anao tsy afa-manoatra dia Sunifiram.
Hatreto dia mbola tsy nisy ny vokany ratsy Sunifiram, fa tsara ny hitadidiana fa mbola tsy vita ny fitsapana ny olombelona sy ny fitsapana. Ny fikarohana natao tamin'ny biby dia mampiseho fa ity nootropic ity dia sady azo antoka no zakaina tsara. Mampiseho ihany koa fa na dia amin'ny doka avo kokoa noho ilay voatondro aza dia tsy miteraka risika amin'ny poizina izany.
Ny voka-dratsin'ny Sunifiram izay voalaza fa kely dia kely ary lasa tsy ho ela. Anisan'izany ny fitomboan'ny mari-pana amin'ny vatana, ny fitomboan'ny rora, ary ny hatsembohana. Mety hiteraka aretin'andoha koa izany, hampitombo ny fahatsapana ny fanentanana am-peo sy ny sary, ny hidin'ny orona, ary ny tsy fahitan-tory.
Ireo voka-dratsin'ny Sunifiram ireo dia voalaza fa hitombo rehefa mihinana fatra Sunifiram avo dia avo ny olona iray na manambatra azy amin'ny fanafody hafa. Raha mandray ny doka atoro anao ianao dia mety tsy hijaly amin'ny iray amin'ireo vokany voalaza etsy ambony. Isaky ny mahatsapa ianao fa mitsofoka ao an-doha dia tokony hitodika any amin'ny Alpha GPC.
Iza no afaka mampiasa ny Sunifiram
Sunifiram dia mety tsara amin'ny;
Ireo mpianatra mila mianatra sy mitazona fampahalalana marobe.
Ireo olona izay mianatra fandaharam-pianarana vaovao, izany hoe ireo mpandrindra ny ordinatera sy ireo izay te hahafantatra hatrany ny fironana vaovao toy ny web-designers
Injeniera sy teknisiana izay mila asa iray mba hamoronana sy hamaha olana olana haingana
Ireo olona izay mila miezaka mafy mamaky be dia be mba hijanona ho manam-pahaizana sy mahay
Araka ny hita ao amin'ny lahatsoratra, Sunifiram dia karazana nootropic izay hamaly ny filan'ny vatanao amin'ny manodidina rehetra. Raha resaka fiarovana dia entina am-be; rehefa dinihina tokoa, tsy miaraka levitra izay hahatonga anao hahita dokotera aorian'izany. Ny zavatra tokana azonao atao dia ny misafidy ny tsara tsy misy ifotony mba hampifandraisana azy io ary ampiasao ny vola marina amin'ny fotoana mety. Mandidy ny anao androany ary manatratra ny tanjonao ara-batana sy ara-tsaina.
Phosphotransferases-Fandrosoana amin'ny fikarohana sy fampiharana: famoahana 2013, pejy 16-30
Ampakines: Ampakine, Cx717, Idra-21, Ly-503,430, Aniracetam, Pepa, Farampator, Cx-516, Unifiram, Sunifiram, General Books, pejy 1-36
The Mind Roving: Fomba Enti-mody ho an'ny Fampivoarana Kognita, nataon'i Anthony Simola.